Shiinaha STEVIOSIN soosaarayaasha iyo alaableyda | HEX
Stevioside (CNS: 19.008; INS: 960), oo sidoo kale loo yaqaan Stevioside, waa glycoside laga soo saaray caleemaha Stevia Rebaudia (Stevia), oo ah qoys dhir ka tirsan qoyska isku dhafan.
Qiimaha kalooriga Stevia waa 1/300 oo keliya oo sukrose ah, ma nuugo ka dib qaadashada jirka bini'aadamka, ma soo saaro kuleyl, wuxuu ku habboon yahay macaanka iyo bukaanka buurbuuran macaaneeyaha. Marka Stevia lagu qaso sukrose fructose ama sonkorta isomerized, macaankeeda iyo dhadhankeeda waa la horumarin karaa. Waxaa loo isticmaali karaa nacnac, keegag, cabitaanno, cabitaanno adag, cunto fudud oo la shiilay, dhir udgoon, miro cagaaran. U adeegso si dhexdhexaad ah iyadoo loo eegayo baahiyaha wax soo saar. Ha ku nuugin ka dib markaad wax cunaysid, ha soo saarin tamar kuleyl ah, sidaa awgeed sonkorowga, buurnida bukaanku waxay leeyihiin macaan dabiici ah oo macaan.
Maaddaama ay tahay soosaarida ugu weyn ee Stevia rebaudiana, steviol glycosides waxay leeyihiin qiimo caafimaad iyo mid la cuni karo, nabadgelyadooda waxaa sidoo kale baaray oo caddeeyay ururada caalamiga ah ee xirfadleyda ah
Badbaadada la cuni karo ee steviol glycosides ayaa ka gudubtay cilmi baaris adag oo ku saabsan asxaabta. Dhammaan ururada sharciyeynta caalamiga ah waxay u arkaan stevia inay tahay shey cunto aamin ah. Ururadan waxaa ka mid ah: Guddiga Xeerka Cuntada (CAC), Ururka Cuntada iyo Beeraha ee Qaramada Midoobay / Hay'adda Caafimaadka Adduunka ee Wadajirka ah ee Kordhinta Cuntada (JECFA), Hay'adda Badbaadada Cuntada Yurub (EFSA), Maamulka Cuntada iyo Dawooyinka ee Mareykanka (FDA) iyo New Zealand Xafiiska Maamulka Heerarka Cuntada (FSANZ).
Stevia waa macaaneeye ay dadka badankiisu yaqaanaan. Sidoo kale waa geedo caan ah oo soo noqnoqda xadka u dhexeeya Paraguay iyo Brazil ee Koonfurta Ameerika. Caleemaha stevia waxaa ku jira walax macaan oo loo yaqaan "Stevia". Stevia la safeeyey waa kareem aan midab lahayn oo aan dhadhan lahayn. Waxay leedahay macaan qiyaastii 300 jeer ah sonkor. Sababtoo ah kalori hooseeya, oo si fudud ugu milmi kara biyaha ama aalkolada, iyo waliba kuleylka u adkaysta, waxaa lagu tilmaami karaa inay tahay badeecad aan sonkorta lahayn oo lagu beddelo sonkorta waana macaan badanaa loo isticmaalo cuntada sonkorowga ama khafiifinta cuntada. Stevia waxaa loogu yeeraa "Kahei" (Gulani, oo macnaheedu yahay "cawska macaan") Paraguay, waxaana loo isticmaalaa in lagu daro macaan yerba mate.
Hore: White Willow Soo saar budada
Xiga: Siberian Ginseng Soosaarida budada
Rhodiola Rosea Soosaarida budada